Niondrika an'isa 2 noho 1 nanoloana an'i Angletera i Tonizia. Baolina maty tao anatin'ny minitra fanampiny tsy hifaranan'ny lalao no nitondra ny fandresena ho an'ny Anglisy. Resin'i Suède 1 noho 0 i Corée du Sud. Tamin'ny isa mazava 3 noho 0 kosa no nandresen'i Belgique an'i Panama, izay ekipa vao sambany niatrika Mondial.
Tsy hisy hody maina tanam-polo ireo mpilalao mandray anjara amin’ity fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny baolina kitra tanterahina any Rosia ny 14 jona ka hatramin’ny 15 jolay 2018 ity, fa hotoloran’ny Federasiona iraisam-pirenena amin’ny baolina kitra (FIFA) vola avokoa. Ankoatra izay fampanantenana ataon’ny firenena fiavian’ireo ekipa miisa 32 mandray anjara, dia hahazo 128 934 000 000 Ariary (38 000 000 dolara) avy amin’ny FIFA ny ekipa tafavoaka mpandresy ka handrombaka ny amboara amin’ny 15 jolay 2018. Hahazo 95 004 000 000 Ariary (28 000 000 dolara) kosa ny ekipa resy amin’ny famaranana.
Nandiso ny tombatomban’ny mpahay baolina kitra ny voka-dalao tamin’ity alahady 17 jona 2018 ity, satria sahirana ireo ekipa heverina fa vaventy. Resin’i Serbia tamin’ny isa 1 noho 0 i Costa Rica. Lavon’i Mexique 1 noho 0 ihany koa i Allemagne. Tamin’ny lalao fahatelo, dia voatazon’i Soisa ady sahala 1 noho 1 ry zareo Breziliana.
Amin’ireo mpilalao miisa 736, mitsinjara amin’ny klioba miisa 32, mandray anjara amin’ny fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny baolina kitra, izay tanterahina any Rosia ny 14 jona ka hatramin’ny 15 jolay 2018 dia ilay mpilalao aostraliana Daniel Arzani (4 janoary 1999) no zandriolona indrindra. 19 taona sy 6 volana ny tovolahy. Ilay mpiandry tsatoby ejipsiana, Essam El Hadary, kosa no be taona indrindra. 45 taona ny lehilahy ary izy hatreto no heverina ho zokiolona indrindra tamin’ireo mpilalao niatrika ireo andiana Mondial hatramin'izay. (Jereo Sary Tohiny)
Niondrika tamin’ny isa 2 noho 0 nanoloana an’i Croatie i Nizeria tamin’ny lalaony voalohany amin’ny fifanintsanam-bondrona amin’izao fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny baolina kitra tanterahina any Rosia izao. Akipa tanora indrindra i Nizeria raha ny salan-taonan’ny mpilalao (25 taona), ary mihevitra fa mbola manantena vokatra tsara amin’ireo lalao roa anaty vondrona D hatrehiny. (Jereo sary Tohiny)
Nahavita fahagagana ny ekipan’i Islandy tamin’ny lalao voalohany nandray anjara tamin’ity fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny baolina kitra tanterahina any Rosia ity. Voatazony ady sahala 1 noho 1 i Arzantina. Nahazo “penalty” i Arzantina, fa voatohan’ny mpiandry tsatoby ny baolina nodakan’ilay kintan’ny kitra Arzantina Lionel Messi.
Resy avokoa tamin’ny lalao voalohany natrehiny tamin’izao fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny baolina kitra, tanterahina any Rosia izao, ireo ekipa roa nilalao omaly zoma 15 jona 2018. Tao amin’ny vondrona A, dia resy tamin’ny isa 1 noho 0, nanoloana an’i Uruguay i Egypta, tao amin’ny vondrona B dia mbola io isa io ihany koa no nandresen’i Iran an’i Maroc, rehefa nanao hadisoana tamin’ny minitra farany ny vodilaharana, ka namono tena. (Jereo sary Tohiny)